Wararka - Xaqiijinta cuntada
On July 28, 2020, waaxda ay khuseyso ee Maamulka Cuntada iyo Dawada ee Shandong ayaa u oggolaatay qeybta baaritaanka qeybta saddexaad, SGS, inay dib u eegis ku sameysay nidaamka maareynta tayada dawada ee Limeng, oo ku saleysan nidaamka maareynta HACCP ee caalamiga ah. Mashaariicda kaabayaasha cuntada, budada caanaha iyo nacnaca ciridka ayaa dib loo eegay.
Labadii maalmood, khubaradii saddexaad waxay dhammeeyeen dib-u-eegis ballaadhan oo ku saabsan nidaamkayaga maaraynta tayada. Tusmada kormeerka waxaa ka mid ah qalabka dhismaha iyo dukumiintiyada software-ka ah. Khubarada ka hor inta aysan hubin alaabta ceyriinka, sheybaarka, aqoon isweydaarsiyada, goobaha wax soo saarka, qalabka wax soo saarka, iyo qalabka ogaanshaha.
Dhinaca software-ka, khubaradu waxay dib u eegeen dukumiintiyada feylka, sida waafaqsan shuruudaha HACCP, khubaradu waxay tilmaamayaan dhowr shuruudood oo muhiim ah, kuwaas oo ku saleysan nidaamka HACPP ee barta xakamaynta muhiimka ah iyo qodobbada kale. Mid kale, diiwaanka tababarka, maamulka caafimaadka iyo faylalka keydinta ayaa sidoo kale la hubiyey.
Khubarada SGS oo khibrad u leh booqashada laba maalmood, waxay naga aqbaleen shaqadeena ku saabsan wax soo saarka iyo maaraynta, waxayna naga rajeeyeen inaan dejino dalabyo dheeri ah oo ku saabsan habka wax soo saarka iyo maaraynta, taasoo ku saleysan HACCP.
Marka la eego natiijooyinka dib-u-eegista, shirkaddayadu waxay abaabushay maareeyayaasha sare iyo shaqaalaha wax ka beddelka ku-meel-gaadhka ah, iyo hubinta nidaamka HACCP ee wax soo saarka. Qof kastaa wuxuu mas'uul ka yahay inuu hubiyo in alaabtayadu caafimaad qabaan oo ay aqbalaan suuqa iyo macaamiisha. In geeddi-socodka horumarka Limeng ee horumarinta, waxaan had iyo jeer ku haynaa inaan la shaqeyno hay'adaha baaritaanka caanka ah ee caalamiga ah, sida SGS, BSI UK, TUV iyo hay'adaha kale si nidaamkayaga wax soo saarku u leeyahay hawlgal sax ah oo loo hubiyo in alaabteenna ay aqbalaan .